Muddaharaadyo ka dhan ah xukunka madaxweyne Cumar Al-Bashiir oo gilgilay guud ahaan Suudaan - BBC News Somali
Muddaharaadyo ka dhan ah xukunka madaxweyne Cumar Al-Bashiir oo gilgilay guud ahaan Suudaan
Maalintii Sabtida ahayd ayaa mas'uuliyiinta dalkaasi Suudaan waxa ay xabsiga dhigeen 14 hoggaamiye oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka, waxaana sida uu sheegay afhayeenka isbahaysigaasi dadka la xiray ka mid ah hoggaamiyaha isbahaysigaasi Faaruuq Abuu Ciisa oo 85 jir ah.
"Waxaan dalbaneynaa in si deg deg ah loo sii daayo dadkaasi. Xarigooda ayaa ah isku day ay dowladdu ku dooneyso in ay kaga hortagto dibadbaxyada," ayuu yiri afhayeenka isbahaysigaasi mucaaradka Sadiiq Yuusuf.
Sadiiq Al-Mahdi oo ah hoggaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalkaasi ee Umma ayaa cambaareeyay "caburinta shacabka dalkaasi" waxa uuna sheegay in dibadbaxyadani ay ka dhasheen xaaladda sii xumaaneysa ee dalkaasi.
Sadiiq Al-Mahdi oo muddo laba jeer ah ra'iisalwasaare ka soo noqday dalkaasi ayaa Arbacadii la soo dhaafay ku soo laabtay dalkiisa oo uu muddo ku dhawaad sanad ah uga maqnaa musaafuris.
Dibadbaxyada dalkaasi Suudaan ayaa ka billowday magaalada Cadhbara ee ku taal bariga dalkaasi, halkaa oo dad dibadbaxyo dhigaya ay gubeen xafiisyada xisbiga madaxweyne Al-Bashiir ee Al-Mu'tamar Al-Wadhani.
Deegaanka El Rahad ee ku yaal koonfur-galbeed Khartuum, xafiiska xisbiga haya talada dalkaasi ee Al-Mu'tamar Al-Wadhani iyo xafiisyada kale ee maamulka ayaa dab la qabadsiiyay, waxaana dadka dibadbaxyada dhigaya oo ku dhawaaqaya "ma ogolin gaajadu" sunta dadka ka ilmeysiiso ku kala eryay ciidamada booliska, sida ay sheegeen dad goobjoogeyaal ahi.
Sanadkii 2011-kii, Suudaanta Koonfureed ayaa ka go'day Suudaan inteeda kale, waxaana arrintaasi ka dhashay in saddex meelood meel khayraadka dalkaasi uu qaniga ku ahaa uu maro dhinaca Suudaanta Koonfureed.